Aabe & Hooyo 18 caruur ah dhaley oo rajeynaya ilmo kale(Warbxin+Sawiro) – SBC
Aabe & Hooyo 18 caruur ah dhaley oo rajeynaya ilmo kale(Warbxin+Sawiro)
Kelly Bates waa hooyo 44 sano jir ah waxay leedahay 18 caruur ah walina waxay ALLE ka baryeysaa laba ilmood oo kale oo dheeraad ah si ay u hesho 20 ilmood, iyadoo doonaysa in qoyskeedu noqdo qoyska ugu balaaran wadanka Mareykanka.
Kelly Bates ilmaha ay dhashay kuma jiraan mataano waxayba ka jeceshay in ilmo galeenkeedu uu banaan yahay inay ilmo sido mar kasta oo ay uur leedahay, waxaana nolasheeda inta badan ay ku qaadatey ilma dhalow mana helin nafis laba sano oo is xiga.
Kelly oo degan magaalada Lake City ee gobolka Tennessee ee dalka Mareykanka waxaa dhawaan wareysi xiiso badan la yeeshay talefishinka caanka ah ee dalka Mareykanka saldhigiisu yahay ee ABC waxaana lagu wareystey barnaamijka Nightlife.
Iyadoo ka hadleysay dareenkeeda ilmo dhalista ah waxay tiri “Waxaan u arkaa wax iska caadi ah inaan mar kasta uur leeyahay waxaanba ka jeclahay mar kale, aad ayaana ugu faraxsanahay inaan ilmo sido (Uurko ku qaado)”.
Kelly waxay dhashay Zach, 22 sano jir, Michaella, 21 sano jir, Erin 20 sano jir, Lawson 19 sano jir, Nathan 18 sano jir, Alyssa 16 sano jir, Tori 15 sano jir, Trace 14 sano jir, Carlin 13 sano jir, Josie 12 sano jir, Katie 10 sano jir, Jackson 9 sani jir ah, Warde 8 sano jir, Isaiah, lix sano jir, Addalle Shan sano jir, Ellie afar sano jir, Callie laba sano jir & ugu dambeyntii Judson oo 11 bilood jira balse aan la fileyn in uu noqdo kii ugu dambeeyey sida ay rajeynayaan Kelly & saygeeda Gil.
Qoyskan oo ka kooban 18 caruur ah & labadii waalid waxay jecelyihiin oo ay saaxiib la yihin qoyska kale oo gobolkaasi ku nool oo 19 qof ka kooban kuwaasi oo ay had & goor is booqdaan.
Labada qoyska marka ay isku yimaadan waxay tiro ahaan noqdaan 37 qof laakiin waa uun laba qoys oo laba guri ka soo kala toosaa, waxaana marka ay isku yimaadan isku noqdaan dad iyagu iska hela oo buuqooda & sawaxankooda ayayba ku raaxeystaan oo u ah tamashle.
Kelly & Gil waxay haystaan madhabta lagu magacaabo evangelical Kirishtanka kuwaasi oo aan aaminsaneyn amuuraha la xiriira xakeynta dhalmada waxaana ay sheegeen in ay arintooda u taal xagg ALLE.
Tirakoobkii ugu dambeeyey ee gobolka Tennessee laga sameeyey sanadkii 2010-kii qoyskan waxay 7 jeer ku soo jibaarmeen qoysaska kale ee caadiga ah ee isku gobolka ay yihiin.
“Waxaynu wadajir isku tusnay inaynu aamino ALLE inta caruur ah ee aynu helayno, waligeyo kuma aynan fakarin in aan leenahay 18 caruur ah, waxaanba u haysanaa mid, laba ama sadex” ayuu yiri Gill oo ah Aabaha qoyskan rajeynaya in ay laba ilmood oo kale dhalaan si ay ula mid noqdaan laba koox oo kubada cagta garoon kuwada ciyaara oo ka kooban min 11 qof.
Gil wuxuu sheegay in aanay dooneyn inay iska daayaan hadii ILAAH uu siinayo ilmo, wuxuu tiri “Waxaynu doonaynaa inayu ALLE aamino, caruurteenu waxay u baryaan ALLE inay helaan ilmo ka yar oo la dhashay, xitaa waxay jecel yihiin inay soomaan”.
Guriga ay ku nool yihiin qoyskan wuxuu ka kooban 5 qof, mid ka mid ah qolalkaasi waxaa isla jiifta 8 gabdhood oo ay 22 sano jir u weyn tahay 2 jirna u yar tahay, waxaana ay sheegeen in sababtu ay tahay in aanay dooneyn inay u kala seexdaan qof qof.
Qoysku hadii ay damcaan inay meel aadan way adag tahay inay helaan baabuur qaada mar mar waxay qaataan laba bas oo mini bus ah, laakiin waxay ka jecel yihiin inay hal bus oo weyn ay qaataan si ay ugu sheekeystaan uguna farxaan.
Gurigu wuxuu leeyahay shan machine oo dharka lagu dhaqo, sadex dhar qaliye & biro dhaadheer oo dharka lagu suro kuwasi oo qaadaya boqolaal shaarar & funaanado isagu jira.
Laakiin hadii wiil damco in uu dhar kala soo baxo qolalka qaar waxay ku qaadanaysaa mudo aad u dheer isagoo waliba daal la daaladhacaya ayuu helaa ama iskaba daayaa taasina waxaa ugu wacan dharka dhooban halkaasi.
Cunto cunida xiliga lagu jiro qoysku wuxuu jecel yahay in ay hal mar wada qurcaadaan, wada qadeeyaan ama wada casheeyaan taasina waxay ka dhigtaa guriga maqaaxi ama Restaurant ay ku soo degan dad safar ah.
Gil wuxuu sheegaa in xiliyada cuntada la cunayo ay ku adag tahay in uu maqlo qofka ka hadlaya geeska uu fadhiyo geeskeeda kael.
Qoyska intaasi le’eg waxaa ka mamnuuc ah in guriga laga daaro wax Tv ah, Internet warkiisa daa filimaana haba sheegeen, malaha waa sheeko diimeed, laakiin waxa kaliya ee qoyskaasi uu saaxiibka ku yahay waa garaacista musticada gaar ahaan nooca loo yaqaan Violins, pianos, kitaarka & inay heesaan.
Gil oo 46 sano jir ah waxay Kelly isku barteen College ku yaal South Carolina sanadkii 1986-dii waxaana ay is guursadeen 1987 isla xiligaasi oo Kelly qaaday uurkii ugu horeeyey mudo 15 sano oo isku xigta ayay sanad kasta ilmo dhalaysay.
Mansha alah anigana wan rajeyna in an dhalo 50caruur ah insha alah
faaladan waxan uga hadlaya sheeko naxdin leh oo igudhacdy
siciid jaamac shibiin says:
waa iga yaabiyeen reerkaan waxaan jeclaan lahaa in aay ahaadan dad heeysta diinta islaamka maadama aay badan yihiin
ale haku hadeeyo diinta islaamka
aamin aamiin aamiin